Ọrụ - Nkwakọ ngwaahịa na mbipụta CO., LTD
Anyị na -achọ nkà ọhụrụ mgbe niile iji zụlite ezinụlọ anyị na EPP Ọ bụrụ na ị nwere mmasị itinye akwụkwọ na EPP, biko tinye ozi gị n'okpuru.
Gịnị kpatara EPP?
Na EPP, anyị na -agba mbọ ịbụ onye ndu n'etiti ụlọ ọrụ nkwakọ ngwaahịa na -agbanwe agbanwe na China na mba ụwa. Anyị na -agba ndị ọrụ anyị ume mgbe niile ka ha maa ọkwa ọkwa. Site na anyị, enyere gị ike ọ bụghị naanị iche echiche nke echiche dị na nkwakọ ngwaahịa na -agbanwe agbanwe, kamakwa iji mee ka ha dị ndụ site n'enyemaka nke otu ndị ọkachamara ruru eru na ahụmịhe sitere na ụlọ ọrụ nkwakọ ngwaahịa na -agbanwe agbanwe.
Ụlọ ọrụ na Omenala
Na EPP, imekọ ihe ọnụ na nkwalite na -aga n'ihu bụ ntọala nke nkwa anyị maka afọ ojuju ndị ahịa. Obi dị anyị ụtọ na anyị nwere ọdịbendị nke imekọ ihe ọnụ, nghọta na idu ndú site na ihe atụ, nke rụpụtara ndị ọrụ anyị nwere oke ọrụ na afọ ojuju dị elu.
Anyị kwenyere na ndị ọrụ anyị bụ ihe kacha mkpa anyị na isi nkuku iji nweta afọ ojuju ndị ahịa dị elu. EPP ji ihe dị iche iche kpọrọ ihe ma jiri ya kpọrọ ihe ma tinyekwa onwe ya n'ọdịbendị na -enweghị ịkpa oke. Na EPP, ị ga -enweta ohere iji ụfọdụ ọrụ kacha mma na ụlọ ọrụ nkwakọ ngwaahịa na -agbanwe agbanwe.